Toddobada anime ee ugu wanaagsan Hulu hadda waa la heli karaa | Madasha Mobile
Waqtigan xaadirka ah waxaan helnaa tiro aad u badan oo aaladaha qulqulka ah (Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, HBO ...) oo waxaan ku haysannaa waxyaabo badan oo ku jira, oo leh xulasho badan oo noocyo ah. Nooca anime wuxuu si gaar ah caan ugu yahay adeegsadayaasha aaladahaan. Haddii aad leedahay xisaab Hulu, waxaa laga yaabaa inaad raadineyso inaad ogaato kuwaas oo ah anime ugu fiican oo aad hadda ka arki karto madalkan.
Hoos waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin anime ugu fiican Hulu oo aan maanta arki karno. Madalkan qulqulka ah waa mid ka mid ah kuwa ku guuleysta kuwa raacsan ugu badan waana shaki la'aan ikhtiyaar wanaagsan oo la tixgeliyo haddii aad rabto inaad awooddo inaad daawato anime kala duwan, maxaa yeelay waxaan haynaa ikhtiyaarro badan oo laga heli karo, oo leh liis -gareed kaas oo sidoo kale ku kordhaya marinka waqtiga ..
Hulu waxay sii wadaysaa inay ku darto isticmaaleyaasha iyo buugyaraha ay ka kooban tahay sidoo kale wuu koraa iyada oo bilaha la dhaafo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha cusub ee lagu sii daayo waxaan ka helnaa anime badan, marka had iyo jeer waxaa jira wax cusub oo aan ku arki karno noocyadan caanka ah. Sidaa darteed, waxaan kaaga tagnaa xulashada anime -ka ugu wanaagsan ee laga heli karo Hulu, oo aad hadda arki karto haddii aad koonto ku leedahay adeeggan maanta. Kuwa jecel noocyadan, waa taxane aadan ka maqnaan karin.
1 Daraasadda Kiiska ee Vanitas
2 Dambiisha Midhaha (Furuba)
3 Daboolka Madoow
6 Dugsiga Sare ee Dhintay
7 Gowraca Jinka: Kimetsu Maya Yaiba
Daraasadda Kiiska ee Vanitas
Taxanahan anime waxay leedahay xilli laga heli karo madal qulqulka. Taxanahan vampire magaciisu yahay Noah Archiviste waxaa loo xilsaaray hawsha helitaanka Buugga Vanitas (Buugga Vanitas), oo ah buug awood badan oo sixir. Markuu sii socdo, vampire -kan ayaa ogaanaya in buuggan uu haysto nin isku tilmaamaya Vanitas oo sheegta inuu yahay dhakhtar. Sidoo kale, dhakhtarkan ayaa sheegaya in lacagtan bilaashka ahi ay bogsiin karto vampire kasta oo adduunka ah.
Buuggu wuxuu leeyahay dhinac madowDabcan, waxaad abuuri kartaa vampires kuwaas oo dhiig badan u badan sidii hore. Sidaas darteed Nuux wuxuu wajahayaa xaalad adag, maxaa yeelay ma garanayo inuu runtii aamini karo dhakhtarkan dahsoon iyo in kale, cabsida laga qabo kooxdan cusub ee vampires -ka oo argagax gelin kara adduunka oo dhan. Taxane madadaalo leh, oo loo tixgeliyo mid ka mid ah anime-ka ugu wanaagsan Hulu, oo aan ku raaxaysan karno haddii aan ku leenahay madal qulqulka caanka ah.
Dambiisha Midhaha (Furuba)
Mid kale oo ka mid ah anime -ka ugu wanaagsan ee aan maanta ku arki karno Hulu waa Basket Fruits, oo weliba mararka qaarkood loo yaqaan Furuba. Xaaladdan oo kale waa dib -u -habeyntii asalka ahayd, taas oo ilaalinaysa daacadnimada sheekada asalka ah. Waxaa jira wadar ahaan laba xilli oo laga heli karo barxadda qulqulka maanta. Sida taxanaha asalka ah, waxaan u aragnaa Tohru Honda inuu yahay jilaaga. Waa ardey dhigta dugsiga sare oo waalidkiis ku waayey si naxdin leh.
Ka dib markii ay waayeen waalidkeed, Tohru waxay u dhaqaaqdaa inay la noolaato saaxiibkeeda Yuki Soma iyo qoyska intiisa kale, kuwaas oo haya sir uu Tohru laftiisu dhowaan ogaan doono: qoyskan waa dhibane habaar u beddesho xayawaanka zodiac ee Shiinaha marka ay la kulmayaan xaalado shucuureed oo aad u xoog badan, xitaa habsi ayaa laga yaabaa inay ku filan tahay tan. Tohru hawshiisa kiiskan waa inuu xal u helo sidii loo soo afjari lahaa habaarkan qoyska dhibaya.
Daboolka Madow waa taxane kale oo anime ah oo aan ku arki karno masraxa, oo leh xilli dhan oo la heli karo si hadda loo daawado. Tixdani waxay leedahay duluc xiiso leh, maxaa yeelay waxay nagu hoggaamisaa duni qof walba sixir ku samayn karo, marka laga reebo jilaaga, Asta. Asta iyo Yuno waa la wada daayay, laakiin Yuno wuxuu leeyahay hibo aad u weyn xagga sixirka iyo farshaxanka dahsoon, wax uusan Asta lahayn. In kasta oo uusan lahayn hibo ama awood sidaas oo kale ah, haddana wuxuu haystaa buug sixir ah oo u oggolaan doona inuu ka fogaado oo uu naftiisa ka ilaaliyo sixir kasta oo ay dadka kale sameeyaan.
20 -ka filim ee ugu wanaagsan HBO dhammaan mowduucyada
Buuggani waa maxay wuxuu u oggolaanayaa Asta riyadiisa ah inuu noqdo boqorka saaxirka xiga (Wizard King) wali waa suurtogal. Yuno wuxuu leeyahay riyo isku mid ah, laakiin wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay Asta, in kasta oo xafiiltan u dhexeeyo. Su’aashu waxay tahay xiriirkan wanaagsan ma la ilaalin doonaa maadaama labadooduba ku sii dhawaanayaan riyadan. Anime -ka ay adeegsadayaasha Hulu aad u jeclaadeen iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dhismaheeda xiisaha leh, sidaa darteed maahan wax la yaab leh in loo tixgeliyo mid ka mid ah anime -ka ugu wanaagsan ee madal ee aan maanta arki karno.
Mid ka mid ah anime -ka ugu wanaagsan Hulu, marka lagu daro ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu ballaaran, maxaa yeelay waxaan helnaa wadar ahaan toddoba xilli oo laga heli karo madasha. Sidoo kale waa mid ka mid ah taxanahaas oo runtii dad badani og yihiin, maxaa yeelay waxay ku saleysan tahay taxanaha manga ee caanka ah. Inuyasha wuxuu na barayaa Kagome, oo ah arday dhigta dugsiga sare, oo ku nool waqtigan xaadirka ah oo aan waqti u hayn khuraafaadka iyo halyeeyada. In kasta oo ay sidaas tahay ilaa uu Kagome laftiisu u guuro Jabaan hore, oo uu la socdo dagaalyahan magaciisu yahay Inuyasha.
Inuyasha ma ahan dagaalyahan kaliya, laakiin sidoo kale waa nus jinni badh aadanaha. Kagome waxay kaloo ogaataa inay xoogaa xoog u leedahay Inuyasha marka dagaalyahankan uu xakameyn waayo, sidaa darteed waxay noqon kartaa kaalmo muhiim ah xallinta xaalado badan. Intaa waxaa dheer, marka sheekadu sii socoto, labaduba waxay ogaadaan inay dareen u qabaan kan kale, waana wax sii murugsan kara sheekadooda. Taxane u soo bandhigaya sheeko caan ah isticmaaleyaal badan, oo si fiican loo qabtay, oo garanaya sida loo socodsiiyo taasina waa mid ka mid ah taxanahaas oo anime-yaasha jecel aysan seegin waqti kasta.
Waxaa ka mid ah anime -ka ugu wanaagsan ee aan ku arki karno Hulu waxaan ka helnaa Bleach, oo taxane ah oo aan leenahay lix xilli oo wadar ahaan la heli karo. Tixdan, Ichigo Kurosaki noloshiisa waxaa xakamaynayey ama saamayn ku yeeshay awoodaha ka sarraysa sannado. Jiritaankeedii caadiga ahaa aad bay isu beddeshaa marka maalin maalmaha ka mid ah Rukia, Reaper of Souls, wuxuu u wareejiyaa inta badan awoodiisa sixir isaga. Tani waxay Ichigo ka dhigaysaa midda noqonaysa midkan cusub ee hadda goosanaya.
Ichigo hadda wuxuu leeyahay kan weyn mas'uuliyadda ilaalinta labada qof ee nool iyo kuwa dhintayba jinniyada sharka ah ee dhuumanaya. Tani waa hawl adag oo uusan awoodi karin inuu keligiis fuliyo, gaar ahaan marka Ruqiya loo silciyo inay ka tanaasushay awoodeedii. Nasiib wanaag Ichigo, marka uu sii socdo wuxuu ogaan doonaa inuu leeyahay xulafo is xigxigay oo ka caawin doona hawshaan adag ee ka hortagga hormarinta jinniyadan sharka leh. Madadaalo iyo sheeko xambaarsan, tani waa sida aan u qeexi karno taxanahan, oo ka mid ah anime -yadaas oo ay tahay inaanan seegin.
Dugsiga Sare ee Dhintay
Anime laga yaabo inay qayb ahaan xusuusiso Dhimashada Socodka, laakiin lagu dhigay Japan halkii ay ka ahaan lahayd Mareykanka. Kiiskan, badbaadayaasha kaliya ee aan la kulanno waa ardayda iyo macallimiinta dugsiga sare. Inta kale waxay isu rogeen zombies adduunkan. Tani waa aasaaska taxanahan, oo noqday mid ka mid ah anime -ka ugu wanaagsan Hulu oo durba ku guuleystey inuu helo guuto wanaagsan oo raacsan adduunka oo dhan.
Tixdani waxay na gaynaysaa Machadka Fujimi, halkaas oo ardayga Takashi Komuro iyo saaxiibkii carruurnimadiisii ​​Rei Miyamoto ay leeyihiin xidhiidh adag, taas oo keentay inay kala fogaadaan. Marka aakhirka zombie -gaani dhaco, labaduba waa inay mar kale is garab shaqeeyaan oo aaminaan midba midka kale. Adduunyadu waa mugdi iyo kakan waana inay taxaddar yeeshaan si ay u ogaadaan cidda ay run ahaantii ku kalsoon yihiin iyo cidda ay ku xisaabtami karaan inay ka adkaadaan zombies -kan.
Gowraca Jinka: Kimetsu Maya Yaiba
Mid kale oo ka mid ah anime ugu fiican Hulu, oo leh oo lagu daray filim la sii daayay 2020 taas oo iyaduna ahayd guul aad u weyn, xitaa waxay ahayd lambarka koowaad xafiiska sanduuqa ee Maraykanka, wax ku adag filim anime ah. Taxanahani wuxuu aad ugu jecel yahay adduunka oo dhan waana mid ka mid ah taxanayaashaas oo dad badani u arkaan inay muhiim yihiin maanta oo nasiib wanaag aan ku arki karno Hulu. Joogitaankii hore ee Japan, Tanjiro oo da 'yar ayaa lumiyay qoyskiisa ka dib markii jinni soo weeraray.
Qofka kaliya ee ka badbaaday weerarkan waa Tanjiro walaasheed yar, Nezuko. Nasiib darro, waxay waayo -aragnimo u beddeshaa jinni. Tanjiro hawshiisu ma sahlana: waa inuu badbaadiyaa nafta walaashii yarayd si uusan u lumin, sidoo kalena u aarguto qoyskiisa. Tani waxay horseedaa in ninka dhallinyarada ahi noqdo waxa loogu yeero Jin-laawe ama ugaadhsade jinni. Waxaa jira xilli dhan oo taxane ah oo laga heli karo barxadda qulqulka maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Toddobada anime ee ugu wanaagsan Hulu hadda waa la heli karaa
Xalka "bandhig ku xiran Nvidia GPU lama isticmaalayo"